Iwu nkwụghachi - YTpals
Anyị na-enye ngwongwo ndị na-enweghị mgbagha. Dịka onye ahịa, ọ bụ ọrụ gị ịghọta nke a mgbe ịzụrụ ngwaahịa / ọrụ ọ bụla na saịtị anyị.
Kpọtụrụ Nkwado Ndị Ahịa
99% nke nsogbu nwere ike iji email dị mfe dozie. Anyị na-arịọ gị ka i jiri nke anyị nyere anyị aka Kpọtụrụ Anyị peeji. Ngalaba na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa anyị ga-alaghachikwute gị n'ime 24-72 (nke na-erughị awa 24) na nyocha nke nchegbu gị yana ngwọta.
Arịrịọ Nkwụghachi arịrịọ ruru eru
Nnyefe ahia / oru a:
N'ụfọdụ oge usoro a na-eji nwayọ, ọ na-ewe obere oge ka iwu gị wee gwụ. N'okwu a, anyị na-akwado ịkpọtụrụ anyị maka enyemaka. A ga-edenye nkwenye maka inyefe ego na Ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa na edere n'ime ụbọchị 7 site na idobe iwu ahụ.
● Egosiputa-adighi ahia:
Ekwesịrị ịgwa ndị ahịa ọrụ ọrụ mkpesa ha n'ime ụbọchị 7 site na ụbọchị ịzụta. Ekwesịrị inye ihe akaebe doro anya na-egosi na ngwaahịa / ọrụ ahụ azụrụghị ka akọwara na weebụsaịtị. A naghị asọpụrụ mkpesa nke dabere na atụmanya ụgha nke onye ahịa ahụ.
Policy Iwu Ndenye aha
Mgbe ịzụrụ ndenye aha, Elite ma ọ bụ nnwere onwe Celebrity, ị ga-akwụ ụgwọ onwe gị n'otu ụbọchị ahụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ n’ oge ụfọdụ ị chọghị itinye ndenye aha gị YTpals, zitere anyị ozi site na anyị Kpọtụrụ Anyị Ibe ya, anyị ga-edobe akaụntụ gị ka ọ gwụchaa na ndenye aha ọnwa gị ugbu a. A na-anabata gị ịkagbu ndenye aha gị n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ dịka ọmụmaatụ, ịdenye aha na September 23rd, mana dee anyị gbasara ịkagbu akaụntụ gị ka izu ole na ole gachara na Ọktoba 10th, anyị ga-edobe akaụntụ gị ka ịkagbu na October 23rd, nke ga-abụ njedebe nke ndenye aha ọnwa gị ugbu a. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkagbu ozugbo, naanị mee ka anyị mara ma anyị nwere ike ịme gị nke ahụ. Enweghị iwu ka ị nọrọ na ntinye aha maka oge ọ bụla, mana ị ga - ede akwụkwọ anyị mgbe ịchọrọ ịkagbu. Anyị ga - ejikwa ya ma zitere gị ozi nkwenye.
Policy Iwu Nkwụghachi criptiongwọ:
Ọ bụrụ na ịzụta atụmatụ ndenye aha ma ghara inwe obi ụtọ na ọrụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị n'ime ụbọchị 7 nke ụbọchị ịkwụ ụgwọ ndenye aha anyị ga-akwụghachi ma kagbuo ndenye aha gị. Ọ bụrụ n’ịkpọtụrụ anyị karịa ụbọchị 7 ka akwụchara ndenye aha gị ma rịọ nkwụghachi, ndị otu anyị ga-enyocha akaụntụ gị yana ọ bụrụ na anyị chere na o kwesịrị ekwesị, ga-akwụghachi nwube gị kpamkpam. Xbọchị 7 gara aga, ị nweghị ikike nkwụghachi.
Nyere Afọ Ojuju
Anyị guzo n'azụ ngwaahịa anyị ma nwee obi ụtọ iji nyefee ndị ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ntanetị kachasị mma n'ịntanetị taa. Anyị enweghị ike ịnye nkwụghachi oge niile, mana ọ bụrụ na n'ime ụbọchị 7, ị nweghị obi ụtọ na usoro gị naanị Kpọtụrụ Anyị anyị ga-ahụkwa mkpebi na-echegbu gị.